Wareysi: Gaadiidleyda Soomaalida ah ee Maraykanka oo ka cabanaya sare u kaca shidaalka
Qiima kororka ku yimid shidaalka dalka Maraykanka ayaa gaaray heerkii ugu sarreeyay abid ee taariikhda Maraykanka, waxaana halkii gallon ee ah qiyaasta lagu cabiro dareeraha ee maraykanka oo u dhiganta ku dhowaad 4 littre uu gaaray ku dhowaad 5 dolla, isagoo sare u kacay wax ka badan kala bar.
Qiimo kororkan ayaa saameyn xooggan ku yeeshay soomalida ku ganacsata gaadiidka waaweyn ee xamuulka ah ee loo yaqaqaano traagyada ee isaga kala goosha gobolaada dalka Maraykanka. Waxaana ay taasi sababtay in gawaari badan ay shaqada joojiyaan.
Daahir Aaden Axmed (Daahir Sokeeye) oo ka mid ah dhallinyarada Soomaalida ee ku shaqeysata gaadiidka taraagyada ayaa Caasho Ibrahim Aden uga sheekeeyay isbeddelka ku dhacay shaqadooda ina ay la eg tahay.
Gaadiidleyga Soomaalida ah ee Mareykanka oo cabanaya sare u kaca shidaalka